Taskade: भिडियो र सहयोगी सम्पादनको साथ एक वास्तविक समय टास्क प्रबन्धक Martech Zone
Taskade: भिडियो र सहयोगी सम्पादनको साथ एक वास्तविक समय टास्क प्रबन्धक
बिहीबार, जुन 28, 2018 बिहीबार, अप्रिल 1, 2021 Douglas Karr
यो गत महिना, मलाई दुई बिभिन्न फर्महरु द्वारा हाम्रा परियोजनाहरु को लागी केहि ब्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गर्नका लागि सोधेको थियो। ती दुबै डराउँछन्। धूर्त राख्नुहोस्; यो परियोजना व्यवस्थापन हो जुन मेरो उत्पादकत्वलाई मार्दैछ। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रणालीहरू प्रयोग गर्न सजिलो हुनुपर्दछ यदि तपाईं आफ्ना टोलीहरू उत्पादनशील हुन चाहनुहुन्छ भने। म साधारण कार्य प्रबन्धन प्लेटफार्महरूको प्रशंसा गर्दछु, र त्यो कसरी हो टास्कडे डिजाइन गरिएको थियो।
टास्कडे भनेको के हो?
टास्कडे तपाईको विचारहरु, लक्ष्यहरु, र दैनिक कार्यहरु को लागी एक वास्तविक समय सहयोग अनुप्रयोग हो। तपाईंको विचारहरू व्यवस्थित गर्नुहोस्, कामहरू सम्पन्न गर्नुहोस्, छिटो र चलाख। चेकलिस्टहरू, नोटहरू, रूपरेखा, हामीले तपाईंलाई कभर गर्यौं।
टास्काडेले आफूलाई लचिलो, सुन्दर र रमाईलो रूपमा विज्ञापन गर्दछ ... साँचो सहकार्यकारी सुविधाहरूको साथ:
कुराकानी - छलफल, सहकार्य, र वास्तविक समय मा कार्य सूची सम्पादन गर्नुहोस्।
कार्यप्रवाह - संगठित गर्नुहोस् र कार्यको तरीका अनुकूलन गर्न को लागी तपाइँ काम गर्नुहुन्छ।
कार्यक्षेत्र -a कार्यक्षेत्र सूची वा नोटहरूको स is्ग्रह हो जुन तपाईं अरूलाई सामेल हुन आमन्त्रित गर्न सक्नुहुन्छ।
टोली कार्यहरू, साझेदारी नोट, र ट्र्याक टीम प्रगति तोक्नुहोस्।
टेम्प्लेट - एक दोहोरिने योग्य काम प्रक्रिया मिल्यो? तपाईंको प्रोजेक्ट जम्पस्टार्ट गर्न टास्कडेको एउटा टेम्पलेट लोड गर्नुहोस्।
सबै भन्दा राम्रो, Taskade छ आवेदन तपाईंको मोबाइल आईओएस र एन्ड्रोइड उपकरण, वा तपाईंको म्याक वा विन्डोज डेस्कटपको लागि। उनीहरू दुबै क्रोम र फायरफक्सका लागि ठूलो विस्तारहरू निर्माण गरेका छन्। टास्कडे अहिले छ मुक्त - एक प्रो संस्करण चाँडै आउँदैछ।
Taskade को लागी साइन अप गर्नुहोस्
टैग: ब्राउजर अनुप्रयोगहरूब्राउजर विस्तारनि: शुल्क कार्य उपकरणमोबाइल अनुप्रयोगहरूउत्पादकताकार्य सूचीकार्य व्यवस्थापनकार्यवाहिकार्यप्रवाहकार्यक्षेत्र
शीर्ष Re कारणहरू ब्रान्डहरू सामाजिक आरओआई यकिन गर्न संघर्ष गर्दछ